“Afartayada ayaa u tagnay wasaaradda ciyaaraha, waxaananu ku nidhi ‘bilaash ayaanu ku shaqaynaynaa. Waxa aanu qabanaynaa horumarinta da’yarta iyo waxaananu siinaynaa duruus waxbarasho.” ayuu mar kale yidhi Ali oo u mahad-celiyey Ahmed Adare oo ahaa wasiirkii hore ee caddaaladda iyo dad kale oo ka caawiyey furidda kuliyadda.
‘Waxaanu haynay 140 carruur ah oo aanu toddoba-toddoba ugu qaybino garoonka”
Warbixinta BBC Sport ayaa la sii raaciyay: “Iyadoo laga jaray kaalmadii caalamiga ahayd, celcelis ahaan reer Somaliland waxay ku nool yihiin $347 doolarka Maraykanka ah, 11-kii carruur ahna mid ayaa dhinta aanay da’diisu gaadhin 5 jirka, nolosha waqtiga ay dadku noolaanayaana waxa lagu qiyaasaa illaa 50 sannadood”.
“Hargeysa, caasimadda Somaliland, geela iyo gaadhi-dameerka ayaa mashquuliya jidadka oo ku dhex milan tagaasida”.
“Inkasta oo ay soo jiidato kobcayaana maalgelinta shisheeye ee laga samaynayo, haddana Somaliland waxa jira caqabado. Haddii ay ka gudubtana waxay caddayn doontaa inay tahay qaran dhab ah. Markii ay xorriyadda ka qaadatay Britain, Somaliland waxay la midowday Somaliya 1960-kii. Markii ay Somaliya ku dhacday dagaalka sokeeye, Somaliland waxay dib ugu dhawaaqday madaxbanaanideeda sannadkii 1991-kii. Illaa markaa, Somalililand waxay ku dedaashay inay dunida tusto madax-bannaanideeda, laakiin adduunku dhinac kale ayuu ka eegay.
“Marka la barbar-dhigo Somalia oo la dhibaatoonaysa weerarro argagixiso, Somaliland waxay ku naaloonaysaa xasillooni, inkasta oo ay fiqiir tahayna dadkeedu way hanweyn yihiin”. ayaa warbixintan dheer ee BBC Sport la sii raaciyay.
“Reer Somaliland waxay kuu sheegayaan in dalkoodu ku yaallo Geeska Afrika, xuduud la leeyahay Djibouti, Ethiopia iyo Somaliya, xeebteeduna tahay bogcad xor ka ah budhcad badeedda Gacanka Cadan. Haddii aad weydiiso Qaramada Midoobay, ama dawlad kale oo adduunka, waxay kuu sheegayaan in Somaliland ay tahay maamul madaxbanaan oo ku yaalla woqooyi-galbeed Somalia”.